Shiinaha 5mm 100% Aluminium silsiladaha siligga Aluminium Warshad, Soo-saareyaal Iyo CE - Tiknoolajiyada Nadiifinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > N95 silig sanka > 5mm 100% Aluminium xarig silig ah
5mm 100% aluminium xarig silig alwaax ah ayaa si fiican u shaqeynaya, ilaalinta jawiga geedi socodka koollada kulul, xoojinta xoogga, heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS, ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaaraan sun aan sun ahayn, iska caabin isku laaban iwm.
Hordhac Soo Saaris ah 5mm 100% Aluminium xarig silig ah
1.The 5mm 100% aluminium strips silig hasgood ductility, ilaalinta deegaanka habka koollo dhalaalid kulul, solidviscosity, Caadi ahaan loo isticmaalo N95 waji.
2. 5mm 100% aluminium silig silig ah ayaa korsada habka jawiga u dhalaalaya kululaynta jawiga kulul, kaas oo si fiican ugu xirnaan kara maro aan tolmo lahayn.
2.ProductParameter (Specification) ee 5mm 100% silsiladaha Aluminiyuuska
Muuqaalka Wax Soo Saarka Iyo Codsiga 5mm 100% Aluminium Xadhig silig silig ah
Our 5mm 100% aluminium silsilado silsilado hase yeeshe ductility iyo qaabaynta saamaynta. Waa laaban karaa 10 jeer oo si iskiis ah ayaa loo furi karaa. Markaad lumiso xoog dibedda ah, waxay ka ilaalin kartaa qaabka soo noqoshada.
Faahfaahinta wax soo saarka ee 5mm 100% Aluminium xarig silig silig ah
Shahaadada Wax soo saarka ee5mm 100% Aluminium xarig silig ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba5mm 100% Aluminium xarig silig ah
Waxaan ku siin doonaa 7 * 24 saacadood adeeg-raac iyo taageero farsamo ah markaad iibsanayso 5mm 100% aluminium sanka xargaha ah ee shirkadeena, si aadan walwal uga qabin iibka kadib.
1.S: maaskaro N95 sanka aluminium ama sanka laba geesoodka ah?
2.S: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
3.S: waa maxay waxyaabaha ufiican sanka sanka ee maaskaro?
4.S: xaqiijin noocee ah ayuu sankaaga bar ku dhaafay?
5.S:sidee ayuu qaboojiyaha sanku u xumaadaa si uu ugu soo celiyo mas'uuliyad?